Zhejiang Kavoun အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ဆဋ္ဌဂံခါးပတ် (နှစ်ဆ V-ခါးပတ်)
ကုန်ကြမ်း Edge V-ခါးပတ်
Zhejiang Kavoun အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Co. , Ltd မှ (မူလက Ningbo Hi-Tech မှဇုန် Kavoun ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ Co. , Ltd မှရည်ညွှန်း) မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီစက်မောင်းနှင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဂီယာခါးပတ်တစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ထက်ပိုမိုဆယျနှစျပွီးနောကျ, တဒါဇင်ကျော်ပြည်နယ်များနှင့်မြို့ကြီးများပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရှင်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရောင်းအားအသင်းများနှင့်အတူအရောင်းဆိုင်များတွင်ထောက်ပံ့ဖို့ကို set up, နှင့်ခိုင်ခံ့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစွမ်းသတ္တိအရှိခဲ့ကြသည်။ 2000 ရဲ့အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အအောင်လက်မှတ်နှင့် TS16949 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အစံအကောင်အထည်ဖော်: ကျနော်တို့ ISO9001 လွန်။
ကုမ္ပဏီ၏အဓိကထုတ်ကုန် "KAVOUN" နှင့် "XIAOHUOBAN" အမှတ်တံဆိပ် HNBR Timingbelt နှင့် CR Timingbelt, ကို double-တဖက်သတ်ဂီယာ synchronous ခါးပတ်, Variable မြန်နှုန်း V ကိုခါးပတ်, မော်တော်ကား V ကိုခါးပတ်, အလိုအလျောက်အချိန်ကိုက်ခါးပတ်, Multi သပ်ခါးပတ်, ဘီးတင်းကျပ်, synchronous ခါးပတ်များမှာ ဘီး, ခါးပတ်ဘီး, စုပ်စက်, Wiper, ထုပ်သိမ်းရန် V-ခါးပတ်နှင့်အခြားဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်မော်တော်ယာဉ်, စက်ကိရိယာတခု, အထည်အလိပ်, ဆေးရွက်ကြီးရေနံဓာတု, အစားအစာ, လျှပ်စစ်ကိရိယာများ, ထုပ်ပိုး, အိမ်သူအိမ်သားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, မိုင်း, အင်ဂျင်နီယာစက်ယန္တရားများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဒါအပေါ်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာ, အရည်အသွေးမြင့်မား, ကောင်းသောအရည်အသွေး, အိုမင်းခုခံ, ချေးခုခံမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ, လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်, အကြမ်းခံများနှင့်တာရှည်ခံခြင်းနှင့်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ထံမှမြင့်မားသောချီးမွမ်းခြင်းကိုခံ ယူ. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ရောင်းရတယ်။
ယင်း၏မွေးသည့် နေ့မှစ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, "အခြေခံနှင့်ဖောက်သည်ဗဟိုပြုအဖြစ်အရည်အသွေးပြည့်ယူပြီး, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအတူဖှံ့ဖွိုးတိုးမြှင့်တင်" ၏သဘောတရားမှလိုက်နာရန်, "ဇွဲ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား" ၏ဝိညာဉျတျောဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှု, စီမံခန့်ခွဲမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်မြင့်နည်းပညာအသစ်ထုတ်ကုန်များ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတဆင့်ကုမ္ပဏီအဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏နည်းပညာအကြောင်းအရာတိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ကုမ္ပဏီအဘို့ဖြစ်၏။ ဖောက်သည်တစ်ဦးထက်ပိုတောက်ပမနက်ဖြန်အနိုင်ရ။
No.118, Dingxiang လမ်း, Hi-Tech မှဇုန်, Ningbo တရုတ်